IHuawei yayiyeyona nto ikhule kakhulu kwintengiso kwi2018 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuthengiswa kwe-Smartphone kwehle ngo-2018, kodwa iiHuawei zaziphezulu ngama-37%
UEder Ferreño | | Huawei, Izaziso
U-2018 wawungenguye unyaka olungileyo wentengiso ye-smartphone. Ukuthengiswa kwehlabathi lonke akukonyukanga, kwaye ezinye iimarike ezinje ngeTshayina ukwehla okubonakalayo kwintengiso. Into ethe yaqatshelwa yimithwalo enzima yentengiso yomnxeba ngaphezu kwayo yonke into, enje iapile y Samsung, Ebone ukuthengisa kwabo kwiimarike eziphambili eziphambili kuncipha. Nangona ezinye iimveliso ezinje ngeHuawei zazinonyaka, elungileyo.
Ngokwamanani amatsha, Ukuthengiswa kwehlabathi kuye kwenyuka kancinane nge-0,1% kwihlabathi jikelele. Kodwa kwimeko yeHuawei, uphawu lwaseTshayina lufumene ukonyuka okumangalisayo kwintengiso yalo kwintengiso yamanye amazwe. Luphawu olunokukhula okuphezulu kwintengiso ye2018.
Ihlala ikota yesine yonyaka, malunga nemihla yeKrisimesi, ixesha elikhethwe ngabasebenzisi abaninzi ukuthenga i-smartphone okanye unike enye. Ukongeza, ubukho beziganeko ezinje ngeLwesihlanu oMnyama, uMvulo weCyber ​​okanye i-11.11 kule mihla, zinceda ukwanda kwentengiso apho. Kodwa ngo-2018 khange kubekho konyuka.
Kwifoto sinokubona amanani kwikota echaziweyo. Into enomdla kule meko kukubona ukuba zimbini iimveliso ezibalulekileyo ezinje ngeSamsung kunye neApple zikubonile ukwehla kwintengiso yazo, ukuphulukana nesabelo sentengiso ngokubanzi. Nangona iimveliso zamaTshayina zezona zinazo yaziwa njengexhamlayo kule kota yokugqibela yonyaka. Zombini iHuawei kunye ne-OPPO zibone ukwanda kwintengiso. UXiaomi, endaweni yoko, ukwehla kancinci.
Kwimeko yeXiaomi, kunokwenzeka ukuba ukuthengisa kwayo e-China kube kubi kakhulu kunokuba bekulindelwe ngaphambili. I-Huawei ikwazile ukukhula nge-4% kule kota market, xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo kule kota. I-OPPO inyuke nge-1,4%, yiyo loo nto ilawula ukugqitha kwiXiaomi kwintengiso yamanye amazwe. Into emangalisa abaninzi.
IHuawei ikhula ngokukhawuleza
Ukongeza kumanani kwikota yokugqibela yonyaka, sikwanedatha yokuthengisa yentengiso yonyaka. Isamsung ihlala kwindawo yokuqala yentengiso, nangona iye yalahleka kakhulu kwintengiso. Xa kuthelekiswa nentengiso ka-2017, uphawu lwaseKorea luphulukene nesabelo sentengiso se-1,9, cinga malunga nezigidi ezingama-26 zeeyunithi ezingaphantsi. Ngokukodwa ukuphela kwayo okuphezulu bekune-2018 embi. Ngaba i Galaxy S10 kunye Galaxy Fold ukuphucula ezi ziphumo?
U-Apple ukwalile ukuthengisa kunye nesabelo sentengiso. Kwimeko yakhe, ilahleko ibingaphantsi kunaleyo ihlupheke yi-Samsung. Iphulukana ne-0,6% yesabelo sentengiso kwaye ukuthengisa kwayo kwehle malunga neeyunithi ezizigidi ezintlanu. Ngokwengxenye ngenxa yokuthengisa okungalunganga kwesi sizukulwana sitsha se-iPhone yayo, abasebenzisi abangayithandiyo.
Nangona iyiHuawei iphakama kwakhona njengelona liphumeleleyo kwintengiso. Uphawu lwaseTshayina luhlala, ngokwala manani kwindawo yesithathu. Ngelixa kwenye idatha ibe yeyesibini. Kodwa umahluko wokuthengisa kunye neApple awuncinci kule meko. Ukuthengisa kwayo kukhule ngeeyunithi ezingama-52 ezigidi Ngo-2018, xa kuthelekiswa no-2017. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukwanda okumangalisayo ngophawu lwaseTshayina.
Ngale ndlela, Isabelo sentengiso sikaHuawei sonyuke kakhulu. 3,2% ngaphezulu xa kuthelekiswa nedatha yonyaka ophelileyo. Ke luphawu olukwazileyo ukukhula kwezona ndawo ziphambili kwezi zi-5 zeemveliso ezithengisa kakhulu kwihlabathi liphela. Kwakhona, iHuawei ayisiyiyo kuphela uphawu olunonyaka olungileyo jikelele. UXiaomi uvale unyaka opheleleyo ngamanani aqinisekileyo.
Uphawu lwaseTshayina lukhule nge-2.1% kwisabelo sentengiso, eliguqulela kunyuso lweeyunithi ezizigidi ezingama-34 kwii-smartphones zazo. Ngaphandle kwamathandabuzo, amanani amahle kakhulu e-brand, eqhubeka nokwanda kwayo kwimarike yamanye amazwe, yiyo le nto iqhuba ukuthengisa kwayo ngale ndlela, kuba e-China khange ithengise njengoko bekulindelwe. Ucinga ntoni ngala manani entengiso ka-2018?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ukuthengiswa kwe-Smartphone kwehle ngo-2018, kodwa iiHuawei zaziphezulu ngama-37%
Izikrini ze-Samsung Galaxy S10, zingcono ngaphandle kwe "notch"
Ungaba ngumvavanyi we-beta ye-WhatsApp kwi-Android